Mmekọrịta Diamondback ọ dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Diamondback mmekọrịta r nyochaa - mkpebi ndị bara uru
Diamondback mmekọrịta r nyochaa - mkpebi ndị bara uru
Mmekọrịta Diamondback ọ dị mma?
Dị ka a oru descender, naDiamondback Sync'rọrụukwu. Ogwe oche 150mm na-eme ka ọ dị mfe ịlaghachi na ala, na taya ndị sara mbara na-agagharị site na ihe niile. Ọ bụ obere ịhụ onye ọ bụla na-agba ịnyịnya hardtail na agbụrụ enduro, na makaeziihe kpatara.Ọkt 3 2019
Taa, anyị ga-eleba anya na Diamondback Sync'r Pro m ma tụnyere ya na ochie m Trek4900. Ọ bụrụ n'ị na-elele nyocha a ugbu a, ị nwere ike iche na nke a bụ ntụnyere dị iche, mana ọ baara ndị na-edebanye aha m ezigbo uru. N'afọ gara aga, anyị ejirila igwe kwụ otu ebe a mụta bupị hop, omume usoro nnwale, na ọbụnakwa na-agagharị na skate park, yabụ Diamondback ọhụrụ m nwere nnukwu akpụkpọ ụkwụ iji mejupụta.
N'ezie, ọ dị ka ihe kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbakwunye ihe ike siri ike na usoro ha, yana ọkpọkọ isi, oke aka na-enweghị atụ, na enweghị ụzọ ụgbọ oloko na-enweghị isi. Tinye ya na
Ọ dị m ka e mepụtara ụdị a kpọmkwem maka ndị na-agba m. Tupu anyị agaa na igwe kwụ otu ebe, rịba ama na m tụbara ụfọdụ ị ga na seala na wiil ndị a wee mee ka ha bụrụ ọkpọkọ. Etinyekwara m oche oche KS Lev Integra, na-eji ebe nchekwa ebe a maka eriri.
Ọ dị mma ma dị ọcha, yana ịhapụ ya na tube tube. Ya mere, igwe kwụ otu ebe a bụ mmelite nke ọma na njem m. N'ezie, akụkụ ọ bụla dị mma karịa ihe ị hụrụ ebe a.
Ma olee maka njikwa? Wiil ndị ahụ, taya ahụ, okpokolo agba ya na aka ya bukarịrị, nke ga-emetụta ike ọrụ. Na Sync'r nwere mmetụta ka ukwuu, ma enwere oge n'okporo ụzọ, ọkachasị ntụgharị, mgbe njem na-adị mfe ịnwe aka, mana nke ahụ bụ ebe ọ kwụsịrị. Otu ihe ị hụrụ bụ otu esi ejegharị njem ahụ, ogige skate dị ka BMX.
Ogwe ụkwụ 26 na obere etiti nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji ya mee. Ebe ọ bụ na agbanyela njem ahụ na njedebe ya, ọ dị mfe ikpe ikpe ebe Diamondback ka mma na ebe ọ dara. Dịka ọmụmaatụ, ogo ya buru ibu na-eme ka o sie ike iru 360, mana ọ bụ ntakịrị.
N'ezie, mgbe nwara ole na ole, ọ dịghị njọ na nke ahụ. Otu ebe m juru m anya bụ rabbit hopping. N'agbanyeghị ogo ya buru ibu, Sync’r dị mfe bunnyhop.
O yiri ka o doro anya na nkwusioru ahụ bụ maka nke a, mana n'ezie ọ bụ geometry. Jide n'aka na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala gị dị nso na axle azụ, mana dịkwa nso na njikwa ahụ. Ezie na nke a imewe nwere ike ịkpata a ridiculouslyly igwe kwụ otu ebe, na slack isi tube n'akuku na-eme maka ya site n'itinye n'ihu wheel n'ihu.
Nke a dị ka ngwakọta na-egbu egbu maka hopping, ọbụlagodi maka m. Ikwu okwu banyere slack head tube angle, odi anya kariri maka ibanye ala. Mgbe igwe kwụ otu ebe na-agbadata ala, ndụdụ ahụ na-atụpụta aka iji mịpụta ụsọ ahụ ozugbo.
Na hardtail, ịnwere ike iji enyemaka ọ bụla ị nwere ike nweta na ala, yabụ nke a bụ njirimara mara mma. Na akụrụngwa. Ọ bụghị ihe nzuzo na-amasị m Raceface, sistemụ draịva m agbanwebeghị nke ukwuu.
Nnukwu ihe dị iche ebe a bụ na m gbanwere site na 10-ọsọ gaa na 11-ọsọ na site na Shimano XT na Sram GX. Enwere m ekele maka mmetụ ọkụ dị mkpa iji gbanwee GX, kamakwa ogo ndị agha na Shimano. Ha abụrụ ndị na-agbapụ agbapụ nke ukwuu na ị nweghị ike ịmehie ihe na nke ọ bụla n’ime ha.
Otu n’ime ihe nkwalite kasịnụ Sync’r nwere n’elu Trek m bụ ndụdụ. Fox 34 nwere otutu njem ma odi nma karie Rockshox Recon nke m nwere ezigbo ihe kwesiri ntukwasi obi. Igwe ndị a adịghịdị otu ọnụahịa ahụ, yabụ na ọ nwere ike isi ike ikwenye.
Dị ka Rockshox, edebere m Fox 34 n'oge kachasị oge. Na mbu, etinyeghị m ya na max ma na-agabiga ya siri ike. Iji bụrụ onye zuru oke, echeghị m na nke ahụ bụ ihe Fox ga-atụ anya n'aka gị site na ndụdụ Mid-Traveltrail.
Igwe ohuru ohuru a mere ka m choo igho uzo ndi ozo. Agbanyeghị, enwetara m ụfọdụ ihe ọchị sitere n'aka ndị na-agba ịnyịnya dịka, 'Ebee ka ị si nweta nke a, Egwuregwu Egwuregwu?'. N'ụzọ doro anya, ha na-ezo aka n'eziokwu ahụ bụ na Diamondback nwekwara igwe eji emefu ego nke enwere ike ịchọta n'ọtụtụ ụlọ ahịa mkpọsa.
Agbanyeghị, ozugbo anyị dakwasịrị ụzọ ụkwụ ị ga - ahụ nke ọma na Diamondback a abụghị ihe kpatara ịkwa emo. Dị ka ọtụtụ n'ime unu maara, ịnyịnya ígwè ọ bụla nke nwere ike iguzogide àgwà m jọgburu onwe ya zuru oke maka ụdị ịgba ọsọ ọ bụla. Daalụ maka ịkwọ ụgbọala m taa m ga-ahụ gị oge ọzọ.
ìgwè ndị na-eguzogide ya na aka
Diamondback ọ bụ ezigbo akara igwe kwụ otu ebe?
Ezie na amara maka ya oké ọnụ anyịnya igwe,DiamondbackỌzọkwaanamụfọdụ ụdị dị elu, usoro ọgbara ọhụrụ maka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na ịgba ịnyịnya ugwu. Hzọ igwe kwụ otu ebe ya bụ Haanjo bụ otu kachasị dị na ya, nwere nhọrọ maka njem, njegharị na gravel ịnyịnya nke mere ka ọ bụrụ ọkacha mmasị n'etiti ndị editọ anyị.23bọchị 23 2018
Kedu ezigbo igwe kwụ otu ebe? Ana m enweta ajụjụ a kwa ụbọchị. Ọ bụ ya mere taa m na-enye gị ngwaọrụ ịchọrọ iji chọta igwe ọhụrụ ma ọ bụ nke ejirila n'agbanyeghị akara ahụ. Ma mbụ anyị kwesịrị ịkọwapụta ihe ntinye ntinye dị larịị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na-enweghị ego, mgbe mkparịta ụka a gafere. Naanị pụọ ebe ahụ ma jiri ụyọkọ ego na igwe mara mma ma ịmechaa. Mana echere m na ọtụtụ ndị mbido na-achọ nkwa ego pere mpe ha nwere ike ịme mgbe ha ka na-enweta ezigbo igwe kwụ otu ebe.
Igwe kwụ otu ebe a dị mma nke ukwuu iji rute gị na nnukwu nsogbu oge na oge ọzọ. Nke ka mma, ọ dị maka $ 329. Ee ọ bụ Diamondback Overdrive na m na-agba ịnyịnya maka Diamondback, mana achọrọ m ka ịchefu taa n'ihi na Diamondback nwere ike ọ gaghị adị ebe ị bi ma ọ bụ na ị na-ele igwe eji anya.
Taa, achọrọ m ka ị mee ka igwe kwụ otu ebe a na - enweghị ụcha na enweghị akara. Kedu ka anyị ga - esi kpebie na ọ 'nwere ike' ma ọ bụrụ na ị nyochaa ya? Ka anyị bido site n’ihe ngosi kachasị mkpa nke igwe kwụ otu ebe dị mma: onye na-akwụ ụgwọ ihe ndozi. Ọ bụrụ na ịnyịnya ígwè n’elu ugwu nwere ihe na-eme ya n’azụ, a ga-ekokwasịrị ya n’elu okpokoro a nke obere ígwè a na-akpọ hanga.
N'ọnọdụ ọdịda, e mere onye na-ekokwasị ya ka ọ kwụsị iji gbochie mmebi ya. Enwere ike ịhazigharị ya ma ọ bụ dochie ya na ọnụ ala. Nke a dị mma karịa ịtụba igwe kwụ otu ebe na ahịhịa, nke bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-agbaji akụkụ ọ bụla nke etiti gị.
Kpachara anya na ụdị ihe ngwugwu a, ma ọ bụ nke ka njọ, na onye na-ere ihe ọkụkụ n’elu osisi. Bikes dị ka ndị a nwere ike ịbụ naanị ịdapụ site na mbibi zuru oke, na ịnyagharị ugwu na-abụ ịda. Ya mere, onye na-egbu ihe derailleur bụ ihe mbụ ị kwesịrị ime.
Gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe dị njikere. Ọbụna igwe kwụ otu ebe kachasị mfe nwere nke a kpụrụ akpụ, nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ derailleur. N'ihi ya, nyocha gị kwesịrị ịmalite ma eleghị anya kwụsị ya.
Akụkụ ọzọ dị mkpa ịchọrọ bụ eriri SS, nke ị nwere ike ịmata site na mwepụ ndị a na ebe a, na 4 bolts ndị a na-ejide aka ahụ. Ọ bụrụ n'ịhụ nke a kama, ọ na-abụkarị akụkọ ọjọọ. Ọ bụrụ n’inwere ihe ị ga - arụ ma ọ bụ dochie anya n’ihu, tinyere ndụdụ ahụ, ị ​​ga - ejedebe na akụkụ ndị a na - apụghị ịtụkwasị obi ma ọ bụ akụkụ igwe kwụ otu ebe na - esiri ike ịchọta.
Jisie ịchọta akara ọhụụ nke 90s kwụsịtụrụ ndụdụ iji dochie nke ochie gị. Ọbụghị naanị na eriri na - enweghị eriri dị mfe ma dị ọnụ ala iji kwado ya, mana ọ na - agbasikwa ike, ihe ị ga - achọ imebi. Mgbe ị ruru na wiil ndị, ị kwesịrị ijide n'aka na ha nwere ngwa ngwa tọhapụ levers.
Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na igwe kwụ otu ebe ma na-enye gị ohere iwepu ma ọ bụ dochie wiilị ndị ahụ na aka na-enweghị ngwaọrụ, mana nke ka mkpa bụ na ha bụ ihe ngosipụta maka ebumnuche nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na a ga-apụghị izere ezere taya dị larịị mgbe ị na-agba ịnyịnya ugwu, ọ bụ nsogbu na ịnwe ngbacha 15mm mgbe niile ka ị wepụ mkpụrụ ndị a. Nke ka njọ, igwe kwụ otu ebe na mkpụrụ osisi na axles fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkwalite wiil ndị ahụ, wiil na otu n’ime ihe ị ga-eto karịa ka ị nwetara ahụmịhe.
keto na ịgba ígwè
Yabụ na igwe elu ugwu dị elu, chọọ maka ndị na-agbapụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị hụrụ mkpụrụ, pụọ. Ihe na - esote abiala ma mechikwaa ndi na - emekorita ya, ha adighi n’otu. Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ nsogbu na nke a.
Agbaji ihe ebe a ma na ị nwere ike ịbụ ụgwọ nke igwe gị niile ịkọpụta ihe, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ gị ka ọ dị mma. Ma ọ bụghị ya, chọọ ihe ị nwere ike ịgbanye. Ihe ọzọ ị ga-achọ bụ brek diski na azụ.
Ọbụna ọnụ igwe diski dị ọnụ ala nwere ike gbanwere maka ndị ka mma, nke dị mkpa ịmara n'ihi na igwe kwụ otu ebe ga-enwerịrị isi mgbakwunye maka nke a site na mbido. Nke ka mkpa bụ na breeki breeki bụ ihe a tụkwasịrị obi karịa brek brek, ọ bụ ya mere ugwu igwe kwụ otu ebe jiri gbanwere ngwa ngwa ma kpebisie ike ịgbanwe ha ọtụtụ iri afọ gara aga. Ebe ọ bụ na ezigbo igwe kwụ otu ebe kwesịrị ịdị obere ma kwalite nkwalite, mmadụ kwesịrị inyo enyo nke ukwuu na-enweghị igwe breeki.
N'ikpeazụ, ị kwesịrị ijide n'aka na igwe kwụ otu ebe na-abịa n'ụdị dị iche iche na onye nrụpụta na-enye n'ezie nduzi na nha ị chọrọ. Nke a dị mfe dịka iji Google, nka efu. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na onye nrụpụta anaghị enye ozi a, yabụ na ha nwere ike ọ gaghị eche ọtụtụ ihe banyere igwe kwụ otu ebe ha ma yabụ na ikwesighi ịtụkwasị ha obi ka ha duru gị n'ime ọhịa, yabụ ihe ngosi a abụghị nke ebumnobi karịa ndị ọzọ , ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala, ịnwe otu Inweta igwe kwụ otu ebe nke ga-adịrị gị mma.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-egosi nke a nzọ ụkwụ na-njikere bike, ha bụ n'ụzọ dị ukwuu na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe na ajụjụ na-adịghị izute chọrọ na anyị ga-now-elekwasị anya na ihe na-atụ anya site na ntinye-larịị bike dị ka nke a na ụfọdụ n'ime ihe na i nwere ike ime na ya nwere ike ime iji kwalite ya. Nke mbụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịbanye n'ụgbọ ịnyịnya ígwè bụ B. hardtails ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe na-enweghị nkwụsị azụ.
Njikọ achọrọ maka nkwusioru azụ dị oke ọnụ ma sie ike, yabụ ọ gaghị aba uru itinye ego na ya ruo mgbe ịmalitere imebi otu puku dollar. N'ihi ihe dị mfe, anyị ga-amachi mkparịta ụka a na ihe siri ike. Hardtails na-atọ ụtọ na ngwa ngwa, yabụ ha ka dị mma ibido.
Ma ihe siri ike n'okpuru $ 500 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ XC ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. XC anyịnya igwe na-kachasị maka pedaling na ike nnyefe. Ha dị ngwa ma dịkwa mfe iji gaa ogologo oge.
Mana uru ndị a nwere ike igbochi gị ozugbo ịmalite ịnwale aka gị na freeriding. Nke ahụ apụtaghị na ị gaghị awụlikwa elu n’elu igwe XC. Naanị jumps, tụlee, nnukwu okwute ma ọ bụ ụdị ogologo ọ bụla kachasị mma na igwe kwụ otu ebe.
Hardtail ojii a na-esote Overdrive bụ ezigbo ihe atụ nke igwe kwụ otu ebe. The raked fork, ike ike angles, obosara handlebars, ogologo njem, na mkpumkpu azuokokoosisi na-eme ka ọ ka mma maka ụdị nke ịnya ịnyịnya m na-eme. Ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịtụgharị igwe kwụ otu ebe XC n’ime igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ntụgharị, ịkwesịrị ịkwụwa aka ọtọ gbasara ihe ịchọrọ ime igwe kwụ otu ebe tupu ịzụta otu.
Ma ọ bụrụ na mmefu ego gị dị n'okpuru $ 500, ma ọ masịrị gị ma ọ bụ na ọ masịghị, ị nwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe XC ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ ị gafere na ịwụ elu ma na-ebugharị igwe kwụ otu ebe karịa, ị nwere ike iche na egbochi. Nke a bụ ihe m mere iji melite ike nke mmefu ego m XC igwe kwụ otu ebe.
Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ, aka, na-agbanwe taya. Mgbe m tụbara ndị wider, gnarled taya na m overdrive, ọ dị ka a kpamkpam dị iche iche igwe kwụ otu ebe. Enwere m ike ịgba ọsọ taya ndị a na nrụgide dị ala, nke mere ka ha nwekwuo obi ụtọ ma gbaghara.
Ma ọ gwụbeghị. You na-anụ ụda olu m niile kụrụ aka ebe niile, ma n'ezie ọ bịara kpamkpam n'ọtụtụ mmiri na mmali. Iji idozi nke a, m wụnye usoro nduzi nke na-ewepụ nsogbu dịka igwe kwụ otu ebe a.
Ọ bụrụ na m bụ onye mbido iji nweta dị ka o kwere na a igwe kwụ otu ebe, M nwere ike nweta nkwalite ndị pedals na ma eleghị anya, ndụdụ ka ihe dị ka nke a kwa. Entgba ụgwọ karịa nke a agaghị abụ ihe echekwa ma tụlee na ezigbo ụzọ igwe kwụ otu ebe nwere ike ijide uru ya, ọ ga-aka mma ire ya ma melite ya niile. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na i nweela igwe kwụ otu ebe ma chọpụta na ọ dara ụfọdụ n'ime ule ndị a, ị ka nwere ike irite uru site na edemede a.
Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ugbu a maka gị ma ọ masịrị gị, wee nọgide na-atụgharị. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ọ na - egbochi gị, ugbu a ị nwere ngwaọrụ ịchọta ihe ka mma. Nke ahụ kwuru, anyị ekwubeghị maka mgbakọ, ndozi, ma ọ bụ nkwalite ndị ọzọ niile ị nwere ike ịjụ, site na enyemaka nke ndị na-ekiri m, aga m eme ike m niile ịza ha na nkọwa.
Ya mere, chọta a ezi mbido si igwe kwụ otu ebe na-enwe ya. Maka na ị nọ naanị otu afọ ịhapụ ire ngwongwo gị niile na ịkwụ ụgwọ igwe kwụ otu ebe na-adịghị akwụ ụgwọ. Ọ na-eme onye kachasị mma n'ime anyị. Daalụ maka ịchụpụ m taa wee hụ gị oge ọzọ.
Ego ole ka Diamondback Sync R carbon dị?
sram red nyochaa
Diamondback ọ na - eme igwe ịgba ịnyịnya nke ọma?
Taa, nkeziDiamondback ụzọ igwe kwụ otu ebemara mma ma, n'ọtụtụ oge, a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu. Ha na-enye ọtụtụ ndịokporo ụzọ anyịnya igwesitere na ndị ahụ maka ndị na-agba ịnyịnya ịbanye na ndị ọkachamara dị elu. Na klas niile, ha na-achọ maka mma kachasị mma ma na-ejigide ọnụahịa.Ọkt 9 2020
Kedu nke kachasị mma Diamondback ma ọ bụ njem?
Diamondback ọ ka mma karịa ibu?
Diamondbackbụ otu n’ime mmadụ ole na ole nwere ike ịsọ mpiNnukwuna akuku ala. Ha abụọNnukwunaDiamondbackbụ nhọrọ magburu onwe ya ma ọ nweghị onye mmeri. Ikwesiri iji igwe kwụ otu ebe na-aga nke ọma, n'agbanyeghị na ọ ga-esiri gị ikeDiamondbackn'ihi na a na-ere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na ntanetị.
Cannondale dị mma karịa Diamondback?
Ngwunye knucklebox ha dị mma! Si a etiti ele naanị, M ga-aga naDiamondback, ma ọ bụrụ na ndị ahụ bụ abụọ ị na-atụle, ntule naUzochukwudị nnọọ elu karịa.Dec. 31 2012
Ego ole ka igwe igwe Diamondback bara uru?
ỌtụtụDiamondbackugwuọnụahịa igwe kwụ otu ebemalite na ihe karịrị $ 300. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ịnyịnya n'okporo ụzọ, ị ga-achọ imefu ihe ruru $ 500. N'inwe mmetụta nke ọgaranya, ịnwere ike iji ihe ruru $ 2,500 maka oke ugwu ha zuru okeigwe kwụ otu ebe.Ọgọst 28 2013
Kedu ụlọ ọrụ na-eme igwe igwe Diamondback?
Diamondbackbụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke Regent, L.P., nke nwekwara ịnyịnya ígwè Mavicikana RedlineBgba ígwè.
Giant dị mma karịa Trek?
Ahịa. N'ozuzu,Nnukwudị ọnụ ala karịakarịa Trek. N'ihi ebe esi arụpụta ha,Nnukwunwere ike idozi ụgwọ nke igwe kwụ otu ebe.Mee njemigwe kwụ otu ebe na-enye njem mmefu-enyi na enyi, mana igwe kwụ otu ebe, na nkezi, dị oke ọnụ karịa ịzụta.
Mmekọrịta diamondback bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
DB Sync’r bụ nhọrọ dị oke egwu maka ụmụ nwanyị na-ele anya na-ahụ anya ịnyagharị ugwu ugwu. Anyị nwere mmasị n’otu igwe kwụ otu ebe a na-enye gị ohere isi gbalịa / gbadata n’ugwu, yana ụzọ ụkwụ ndị siri ike. Ndị na-elekọta igwe kwụ otu ebe na fechaa na-adigide ogologo ga-enwe obi ụtọ site na ihe Sync’r nwere inye.
Ego ole ka mmekọrịta mmekọrịta Diamondback
Na ọnụahịa na-amalite na 5 375 ma na-agbanye naanị ihe dị ka £ 500, a na-elekwasị anya anyịnya igwe anya na ndị ọhụụ ọhụrụ. Echela maka nkeji ọ bụla, na Sync 4.0 nke kachasị elu bụ igwe mmefu ego.
Kedu ihe kpatara eji akpọ diamondback mmekọrịta ka akpọrọ bulletproof?
A kpọrọ Carbon Sync'R 'mgbọ', maka ịdịte aka. Bonzọ ụkwụ Carbon Sync’R na-adịkarị mfe ịgbadoro ka a na-echekwa maka ngwa mgbochi nkwupụta zuru ezu - na maka ụfọdụ ndị ọkachamara, gosipụtara njem na-atọ ụtọ karị.